Fitohizan'ny hafatra : Coronavirus
Valiny : 169
rhaj0 - 12/03/2020 18:34
Rahefa misy krizy toa itony, dia fotoanan'ny hamadibadihana izay azo
halalinina izao, ary itaratarafana ny zava-misy...
Ka mikezaka mafy, tsy mandry andro tsy mandry alina, ny Siantista
mitady vahaolana @ ity Coronavirus ity. Eto izao ny Koreana tatsimo
mampiasa ny AI, ary dia fikarohana fatao 3 volana vita ao anatin'ny
3 herinandro. Mampisy fanantenana
Dia mba mikezaka koa ny Mpino sasany, manaraka ny torolalan'ny
Siantista. Ny Papa izao dia TSY mahavita ilay be zesta manoroka olona
na koa ny marary ireny intsony, fa dia mahatsiaro-tena ao anaty la cage
hono izy ao izao rahefa mba mitory na mampiconfesse angaha, satria
TSISY maha-Papa azy ny coronavirus.
Dia TSISY izay maha-benite ny rano ao ampiangonana ao intsony koa
izao, fa dia ahilika any izany ilay "finoa(noampoa)na" ny @ izany.
TSISY rano mazia-mirakla izany eo.
Dia nisy koa anefa indrisy, ireo Koreana-kristiana-mpivavaka-be, izay
TSY mba mihaino ny Siansa sy ny torolalany, ary dia hita fa
ilay Fiangonan-dreo no tompon'antoky ny fipariahan'ny ankamaroan'ilay
Coronovarus tao Korrea Atsimo.
HO henjehina eny @ Fitsarana - criminal charges - ireo Mpino ireto
Fa mbola misy ihany foana no mino(minofoana), toa I Gasy1zay izy teo,
fa hoe, dia mbola I Jesosy foana ihany HONO no manao izao rehetra izao.
Fa enga anie, mba manaraka ny torolalan'ny Siansa ihany zareo, fa tsy
hanaonao foana (noho ny finoany) toa iretsy Koreana-kristiana-mpiavavaka-be.
Ka dia mila averina aseho an-tsary izay "finoana" izay. Ka dia io @
sary io izany, averiko indray, ny ahalehibehan'i Jesosy HONO, sy ny maha-
tompon'antoka azy ny zava-drehetra HONO, araka ilay Finoa(noampoa)nan'ny
gasy1zay - 13/03/2020 16:07
Taiza ndray hono i gasy1zay nilaza fa ny coronavirus dia avy @ Andriamanitra? Jesoa kristy naniraka ny mpianany hametratanana @ marary mba ho sitrana ireny, dia izy ihany no manao ilay aretina?
Tadidio fa rehefa nilaza ny fariseo hoe belzeboba no nandroahin'i Jesoa demonia dia nisy valiteny mazava nambarany hoe raha misy fanjakana miady an-trano dia ho rava ho azy izy, belzeboba tsy afaka handroaka belzeboba, dia hotrizay ihany, raha avy @ Andriamanitra ny aretina dia tsy tokony haniraka ny olona hanasitrana olona Andriamanitra
Raha narary Joba dia tsy aretina avy @ Andriamanitra fa avy @ satana
Satana ny anton'ny ratsy rehetra mahazo antsika fa ny zavatra ratsy indrindra vitany dia ny nandreseny lahatra olona maro fa tsy misy izy / tsy misy Andriamanitra...mba ho lasa hiaraka aminy any @ faheverezana ireo voafitany.
rhaj0 - 13/03/2020 16:34
gasy1zay Satana ny anton'ny ratsy rehetra...
Tena resaka atao @ zaza(saina) amina age (mental) 2 taona izany lazainao izany re ry Gasy1zay. Mety 1 taona akoriny aza, ilay izy vao miana-miteny iny. Rahefa hoz'ilay zaza hoe, pouquoi, dia raha tsy te-hisahirana, dia izao fotisny: izay tsara = anjely, izay ratsy = satana.
izaho aloha TSY nanao an'izany, ary tena nofadiako mihintsy izany, fa niezaka foana aho hanazava.
Firy taona (age mental) kay ianao ao ry GAsy1zay?
rhaj0 - 15/03/2020 22:02
Ity no nozaraiko @ namana atsy @ Fetsyboky Mba-Diniho_kely an'i Lanto
Ny torolalana anay aty, ankoatry ny nolazain'i Lanto ny @
- fifampihatakatahana (social distance),
- sy tsy fikitikitihana zavatra ivelany, sy koa ny tarehy (maso orona, vava),
- sy ny fikohafana ao @ kiho
- ary ny fanasana tanana
- dia rahefa miditra ny trano, dia ampiana gararaka, sy koa misotro rano mafana. Dia atokano any ny akanjo sy entana nentina tany ivelany izay nety nahakasika virus
Dia torohevitra ankapobeny moa, dia tandrovina ny fahasalamana ankapobeny toa ny isan'andro ihany, ampahery ny system immunitaire ao (fanabeazana ara-batana, fisakafoanana madio, mandamin-tsaina, matory tsara, ets...)
Raha ny fahazoako azy koa, dia toa ny virus-na hafa rehetra ihany ilay izy, raha ny fihanaka sy ny mampa-mahafaty azy, fa kosa, avo 10 heny ny fipariahany sy ny mampa-mahafaty azy. Ary ireo olona izay efa marefo ara-pahasalamana (diabetika, ets...) sy ny beantitra no atahorana. Raha tsara ny system immunitaire-nao, dia mety avotra (sitrana) ianao izany na dia ho voany aza, fa kosa, ny zava-dehibe, dia mila tsinjovina ireo marefo ara-pahasalamana.
RAhefa voany, dia toa ilay fahasahiranana rehefa miaina no manahirana. I Lanto mahalala kokoa, fa raha ny fahazoako azy, dia ventilator, dia ampiana oksizena no atao @ marary (ankoatr'izay fanafody).
Fa aoka tsy hikorapaka fa tsy manampy ny korapaka. Dia notsipihin'i Lanto teo koa moa, ary resaka ankapobeny koa ito, fa rehefa desespa na hoe krizy hotr'izao, dia tonga ny mpanao Belazao, ary anisan'io ny mpampanantena mirakla toy ny entin'ny Finoana/Fivavahana. Ataovy mampahery ny sainao ny Finoana/Fivavahana raha izany no ampahery ny sainao, fa kosa, ARAHO NY TOROLALANA AMEN'NY SIANSA.
RBNIR - 16/03/2020 07:31
tsy tokony mba hifaly sy hitsinjaka v ianao ry gasy1zay??, tanteraka aminao izany ny tenin'i Jesosy??,
« Fa Jesosy niantso ireo hankeo aminy ka nanao hoe: Avelao ny zaza hanatona Ahy, ary aza raràna; fa an'ny toa azy ny fanjakan'Andriamanitra. » (Lioka 18:16)
« Lazaiko aminareo marina tokoa: Na zovy na zovy no ny handray ny fanjakan'Andriamanitra tahaka ny zaza, dia tsy ho tafiditra aminy akory. » (Lioka 18:17)
endriny - 16/03/2020 14:40
Ilay tsinajery fahiny aza lasa aiza? Very ilay finoana sa I Jesosy mihintsy no...?
1) Tsy misy tsy hain'Atra tsy ataony
2) Jesosy dia manasitrana ny aretina rehetra
3) Tsy misy tsy sitran'Atra
Fa ny somary mampivanitika kely dia toa ry zareo sinoa tsy mino an'Atra indray no mahafehy an'i Coronavirus
Dia mbola misy vaomaika izy indray no mivavaka ho an'i Papa, kanef any Papa no tokony hivavaka ho azy
rhaj0 - 16/03/2020 15:11
Iee.. ry Sinoa sy ny Japs angaha misomonga @ io.
Ny Kristiana izao, lany indray ny Alahady teo, nitoreo sy nivavabavaka tao, fa tsy ny tokony natao no natao. Tsy mety mianatra avy @ hadalany taloha, dia @ ilay tranga hoe, ireo Kristiana lasan'ny Tsunami #2, rehefa niakatra teny @ bonga hidera HONO fa navotan'Atra t@ Tsunami #1.
Ilay Trump izay nofinidin'Andmntra koa HONO no hanavotra azy, nefa inona no nataon'ilery? Noravany ilay komity nisy siantista mba tokony hisahana ny pandemie talohany teo, f'angamba aminy, vavaka no ilaina fa tsy komity, dia izao vao taitra, dia ilay Jared vadin-janany indray no conseiller supreme @ ilay izy HONO.. inona koa no fantatr'ilehio?
Fa izao tsisy hita intsony ny mpametra-tanana ee.. I Ra-Papa aza mipapapapa...
Fa dia izay no lafiny "tsara" mila avoitra @ krizy toa izao :
1. Izao izao hita tsara fa ilay hoe "fangataham-pitahiana" (miaraka) ohatra dia TSY ILAINA, TSY MAMOKATRA, ary TSY MILA ATAO.
2. Ka dia tena aoka izay mihintsy ity finoa(noampoa)na Mirakla ity, ka hoe Mikimpy-toa-constipE HONO dia mivaha ny olana.
HENOY ARY ARAHO NY TOROLALANA AMEN'NY SIANSA.
Ary izao dieny izao.
RBNIR - 16/03/2020 15:17
efa hoe izay mendrika hoy aho no homeny fahagagana.....
« Fa Izy namaly ka nanao hoe: Tsy mety raha maka ny mofon-jaza ka manipy azy ho an'ny amboakely. » (Matio 15:26)
RBNIR - 16/03/2020 15:18
ka mibebeha raha te hahazo Aminy e!
gasy1zay - 16/03/2020 15:45
Ka nga moa rhaj0 mihevitra hoe akatona ny fiangonana dia tsy misy mivavaka intsony ny kristiana lol? Tsy ilaina(re)o tsy mino fa aminay mety be aminay koa, zay nga zao mikorapaka zany fa miaina ny fiadanan'ny Tompo, mampiadana koa ve ny siansan'i rhaj0 ao?
rhaj0 - 16/03/2020 15:47
RBNIR efa hoe izay mendrika hoy aho no homeny fahagagana.....
Ao @ imazination IRERY anao ao ry RBNIR, dia tena olon-doza mihintsy izao Andrmntra izao.
Aminao, dia izay "mi(beba)bebaka" no mendrika dia iangaran'izao AndmntrAO izao?
Dia ihomehezan'ny olona fotisn y ianao ry RBNIR sy ny hadalanao.
Ao @ imazination-n'ny Kristiana namanao nefa izao, h@ Papa io, dia tena hoe, hum...
- tena TSY mahomby tokoany ny vavaka lavareny sy ny tangorongorona any am-tranon'Andmntra, sy ny petra-tanana... koa na ilay eau benite azany izao kay tena (mety) ahitan-doza... ilay vatana sy ran'i Kristy izao, indrindra akaiky ity ny Paka, dia kay tena resa-kehy, fa TSISY ilaina, TSY mila atao, ary tena TSISY dikany ireto kifombafomba..
- vakiana ilay Baiboly, ka tena TSISY resaka coronavirus akory.. vasabe izany ilay faminaniana ao!!..
- andrasana ihany ilay hoe fahagagana.. herin'Andtrmna.. fa TSISY eee... misononoka ihany ilay virus.
Dia tena hoe, tena aleo marina ...
MIHAINO NY SIANSA DIA MANARAKA NY TOROLALANA AMEN'NY SIANSA
rhaj0 - 16/03/2020 16:25
gasy1zay Ka nga moa rhaj0 mihevitra hoe akatona ny fiangonana dia tsy misy mivavaka intsony ny kristiana lol?
Henoy ihany ny Siansa ry Gasy1zay aa... Dia araho ny vaovao, ngo dia mbola ilaozanao mhevoka ao anaty boky tonta ao indray. Ny torolalana izao ao Etazonia ao dia tsy mihoatra ny 50 rehefa mivorivory.. Ny aty Kanada mbola 250. Ny courbe manisa ny voa izao dia mbola ascendante (ary exponential).
TSY mandeha ilay vavaka ry Gasy1zay aa... Mivoitra tsara izao fa tena TSISY ilavana azy daholo ny fampiarana ao anaty Baiboly ao (@ ity).
Sa ilazao zavatra iray @ resa-baiboly ao mba misy ilavana azy @ io coronavirus io hoe ry Gasy1zay ?
gasy1zay - 16/03/2020 19:41
Rehefa tsy mahita ambara ny siansa dia ampitoviana @ zany koa ny hafa? Ny voalazan'ny baiboly :io nambarako io hoe ny fiadanako mitoetra ao aminareo lol, na izay fiadanana izay fotsiny aza nga vitan'ny siansa? Raha tsy hoe omena antidepresseur kely?
rhaj0 - 16/03/2020 20:07
Pere noel koa manome fiadanana.
Ekeko fa mahavita an'izany ny finoana/fivavahana. Fa arakaraka io. Izaho manokana dia tena ho marary ny saiko raha miorina @ "finoana" ny "fiadanako".
Fa milaza I Gasy1zay ny @ anti-depresseur. Eny tokoany fa tena danz be ihany ry Siantista, rahefa hitany ny mechanism an'izay zava-misy eo, ohatra io ny chemistry mifehy ny depression, dia amoronany chemicals anovana ny fihodin'ny zava-misy. Fa dia io ho'a, dia mahatoky zaodahy mahay manefy rahefa mafy izany ny ady eee...
- Fa tena aleoko lavitra mihintsy mahatoky an'i Zaodahy Siantista,
- toa izay an'ilay Zaodahy m(amp)inomino hoe, fafazana rano fotsiny io dia mety, na mibebabebaka mifona @ izay ota hafa natao io dia sitrana h@ sery sy kohaka.
RBNIR - 17/03/2020 13:11
Raha izaho ianareo mibebaka aho ry zalahy atheiste fa tena mihagiravy ange ity resaka coronavirus ity e!!!
Sao ho tratra eo vao hanenina!!
rhaj0 - 17/03/2020 14:31
ataovy demonstration eto hoe ry RBNIR ny bebaka-manafaka-coronavirus?
RBNIR - 18/03/2020 06:45
Tsy hoe rehefa kristiana dia tsy ho tratra fa mazava ny tenin'i Jesosy raha tsy mibebaka (n'iza n'iza) dia ho tratra avokoa....
Inona marina ny atao hoe mibebaka?
Iza avy no tokony hibebaka?
Lohahevitra hafa mihitsy....
Raha sitrapon'Andriamanitra hoezahina zaraina eto ihany...
rhaj0 - 18/03/2020 13:26
Ka nibebaka izany i RBNIR ao ary dia TSY voan'ny Coronavirus?
Dia bebaka fotisny ve no ilainao ry RBNIR, sa mbo manaraka ny TOROLALANA AMEN'NY SIANSA ihany ianao ao io? (na dia mifanohitra @ izany azany ny fampianarana ao @ BAiboly)
Dia toa an'i Gasy1zay, mbola mandeha mitonantonana any am-piangonana ihany koa ve ianao ao ry RBNIR, sa efa mba tonga saina ihany, fa raha mivorivory anie, dia be ny risque ny ifindrafindran'ny virus?
Dia hipaka koa izao ny Paka. Dia mbola hanao ireo fombafombam-Baiboly ve ianao ry RBNIR, sa mba misaina kely ihany, dia mitsinjo ireo marefo ara-pahasalamana, ary dia manaraka ny TOROLALANA AMEN'NY SIANSA mba tsy ifindrafindran'ny virus?
gasy1zay - 18/03/2020 14:16
rhaj0 - 18/03/2020 14:31